सबिता माताले गरिन् रमेश प्रसाईको अनौ'ठो भबि''ष्यबाणी,राजालाई आन्दो'लनको चासो छैन भन्दा माता जंगीइन्। - Public 24Khabar
Home News सबिता माताले गरिन् रमेश प्रसाईको अनौ’ठो भबि”ष्यबाणी,राजालाई आन्दो’लनको चासो छैन भन्दा माता...
सबिता माताले गरिन् रमेश प्रसाईको अनौ’ठो भबि”ष्यबाणी,राजालाई आन्दो’लनको चासो छैन भन्दा माता जंगीइन्।
मधेसकी छोरी सन्ध्याको मिस नेपाल यात्रा
दशक अघिसम्म पनि मिस नेपाल सुन्दरी प्रतियोगिताबारे कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको धारणा अलि परम्परागत र रुढीवादी थियो । १५ वर्ष अघिसम्म त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मिस नेपालको प्रतियोगिता चलिरहेको समयमा बानेश्वरमा प्रदर्शन हुन्थे।
विरोधको नेतृत्व गर्नेहरू हुन्थे अखिल नेपाल महिला संघ र कम्युनिस्ट पार्टीका महिला संगठन । २०६५ सालमा संसद् बैठक बस्नुअघि मिस नेपालको प्रतियोगिता बीआईसीसीमा हुने गर्दथ्यो । जब मिस नेपाल प्रतियोगितामा नेपालको साझा पहिचान झल्किन थाल्यो बिस्तारै–बिस्तारै मिस नेपाल प्रतियोगितको विरोधका स्वरहरू सुक्दै जान थाले।
हिजो स्वयं सुन्दरी प्रतियोगिताको विरोध गर्ने परिवारका सदस्यहरू प्रतियोगितामा भाग लिन थाले । मिस नेपाल बनेका ‘छोरीहरू’को पफर्मेन्स र लिडरशिपका कारण पनि विरोधका स्वरहरू सुक्दै गए । यो सुन्दरी प्रतियोगिताबारे नेपाली समाजमा आएको एउटा जबरजस्त परिवर्तन हो।
दुई वर्षअघि नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाकी छोरी श्रृंखला मिस नेपाल बन्न सफल भइन् । यसपटक समेत नेकपाकै सांसद इन्दु शर्माकी छोरी पनि मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी छन्।
अझ रोचक कुरा त, उनी तराई–मधेशबाट प्रतियोगितामा समावेश भएका कारण चर्चामा छिन् । उनी हुन् सन्ध्या शर्मा । सुन्दरी प्रतियोगिताको नाममा जुन ढंगले मिस नेपाल प्रतियोगिताको विरोध भएको थियो, त्यो बिल्कुल गलत थियो,’ सन्ध्याका बुवा एवं नेकपा नेता रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘सुन्दरता भन्दा पनि उनीहरूभित्रको क्षमता परीक्षण हुने प्रतियोगिता हो भनेर अहिले धेरैले बुझ्न थालेका छन् ।’
शर्मा सत्तारुढ नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद हुन्। राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको बहस चलिरहेको समयमा सुन्दरी प्रतियोगितामा मधेशकी छोरी सहभागी भएकी छन् । सन्ध्या मिस नेपाल भएमा पछाडि परेका मधेशका महिलाका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्ने परिवारको विश्वास छ।
मधेशमा दाइजो प्रथा उन्मुलनको लक्ष्य !
मधेशमा जन्मे हुर्केकी सन्ध्या शर्मा सानैदेखि अलि फरक स्वभावकी थिइन् । आफ्नो समाजमा छोरीहरूप्रति भइरहेको विभेदका कारण उनमा अलि विद्रोही स्वभाव पैदा भएको थियो । आमा इन्दुका अनुसार एकदिन काकाका छोराको बिहेको कुरा चलिरहेको समयमा दाइजोको कुरा उठ्यो।
उनले दाइहरूसँग झगडा गरिन्, ‘यस्तो पढेलेखेको मान्छेले दाइजो बार्गेनिङ गर्न सुहाउँछ ?’ पढेर आफ्नै खुट्टामा उभिएका छोरीको बिहेमा पनि दाइजोको बार्गेनिङ ! यो त असह्य कुरा हो।
उनले अठोट गरिन्– मसँग बिहे गर्न आउने कसैले दाइजो शब्द उच्चारण गर्‍यो भने पनि म उसँग बिहे गर्दिनँ, बरु त्यसै बस्छु । तराई मधेशमा अहिले पनि दाइजो एउटा मुख्य सामाजिक समस्या बनेको छ । दाइजोकै कारण महिला हिंसाका कारण पारिवारिक कलह र कयौं घटना भइरहेका हुन्छन्।
शिक्षित बर्गका केटाहरू समेत दाइजोका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छ । मधेसमा छोरीहरूलाई गर्ने विभेदविरुद्ध केही गर्छु भन्ने उनको सोच छ, राजनीतिक परिवारमा हुर्केको भएर होला समाज परिवर्तनमा लाग्ने उनको विचार छ,’ सन्ध्याकी आमा इन्दुले लोकान्तरसँग भनिन्।
यसअघि दुईपटकसम्म मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागी हुन फारम भरेकी सन्ध्या पढाइको शेड्युल नमिलेका कारण भाग लिन पाएकी थिइनन् । यसपटक भने प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर मिल्यो ।
‘म कुनै नेसनल फिगर बनें भने दाइजोका नाममा तराई मधेशमा भइरहेको विभेदविरुद्ध अभियान चलाउने छु भन्ने छोरीको पहिलेदेखिको सोच हो, छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना फैलाउने उसको धोको छ,’ छोरीको लक्षबारे बुवा रामकुमारले भने ।
चुरे संरक्षण र पर्यावरण बचाउने सपना
सन्ध्या पढ्नमा पनि उस्तै अब्बल छन् । देहरादुनमा रहेको फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट (एफआरए)मा छात्रवृत्ति कोटामा उनी एमएस्सी गर्दैछिन्, फरेस्टीमा । दक्षिण एसियाका लागि छुट्टाइएको १० जनाको कोटामा उनी छात्रवृत्ति पाएर एमएससी गर्न देहरादुन गएकी हुन्।
बीएससी फरेस्टी गरेकी उनले चुरे संरक्षणबारे थेसिस गरेकी थिइन् । एमएससीमा पनि चुरे संरक्षणमा थेसिस गरेर पीएचडी गर्ने धोको रहेको बुवा रामकुमारले बताए । तराईको पर्यावरण जोगाउन भन्दै नेपालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भएको छ।
चुरे मासिँदा तराईका जिल्लामा बाढी र डुबानको समस्या बढ्दै गएको पर्यावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘नेपालको अन्नको भण्डार मधेशको पर्यावरण चुरेसँग गाँसिएको छ, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने उसको सोच छ, त्यसैमा पीएचडी गर्ने उनको लक्ष्य छ,’ रामकुमारले भने। रामकुमार आफू पनि फरेस्टीका विद्यार्थी हुन्।
Previous articleरमेश र कल्पनाको बारे यस्तो रहेछ सत्य तथ्य हेर्नुहोस Ramesh Prasai , Kalpana Dahala
Next articleओली सरकारको सन’स**नीपूर्ण काम, यसरी फास्ट ट्रयाकमा को”रोनाको खो’प नेपाल ल्याउँदै News Nepal